Fotoana famakiana: 4 minitra Ny fitomboan'ny fironana mankany amin'ny tontolo iainana bebe kokoa ny maha-namana no niteraka maro, ary samy hafa eran-hetsika maitso, amin'ny tanàn-dehibe sy tanàna kely mitovy. Ny iray amin'ireo famantarana maro an'io dia ny fampiakarana ny angovo azo havaozina amin'ny andavanandrom-piainan'ny olona sy ny asany eo aminy…
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny fiaran-dalamby vaovao tsipika efa nanomboka, nandrakotra Azerbaijan, vorontsiloza, ary Georgia. Ny tsipika manarona 820 Kilaometatra sy accommodates freights, ankoatra ny mpandeha fiaran-dalamby. Voalohany, ny tsipika no ho voalohany mba hifandray Eoropa sy Shina raha mitoetra nandika Rosia. Miasa manomboka ny…
Fotoana famakiana: 3 minitra Best sakafo hohanina eo amin'ny fiaran-dalamby amin'izao fotoana izao raha ny marina dia tena matsiro. Satria maro ny fiarandalamby manolotra 5-kintana zavatra ilaina sy ny kilasy voalohany sakafo. Anisan'izany ny sakafo atao amin'ny izao tontolo izao malaza chefs. Mety efa zatra mamaky momba ny sakafo mahatalanjona any amin'ny gara ianao na ny toerana mahafinaritra anao…